आँखा स्वास्थ्य सुझावहरू: तपाईंको मोतिबिन्दुको शल्यक्रिया पछि के गर्ने र नगर्ने - NepalDainik
आँखा स्वास्थ्य सुझावहरू: तपाईंको मोतिबिन्दुको शल्यक्रिया पछि के गर्ने र नगर्ने
मोतिबिन्दु उल्टो अन्धोपनको सबैभन्दा सामान्य कारण हो। शल्यक्रिया मात्र उपचार हो किनभने कुनै पनि औषधि वा आँखाको थोपाले यसलाई निको पार्न सक्दैन। जबकि सबैको रिकभरी समय फरक छ र आँखा डाक्टरले विशेष निर्देशन दिनेछन्, आउनुहोस् मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया पछि के गर्ने र नगर्ने सामान्य कुराहरू हेरौं।
मोतियाबिन्द एक उमेर-सम्बन्धित प्रक्रिया हो र उल्टो अन्धोपनको सबैभन्दा सामान्य कारण हो जसको लागि शल्यक्रिया मात्र उपचार हो किनभने कुनै औषधि वा आँखाको थोपाले मोतियाबिन्दु निको पार्न सक्दैन। मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया एक बाँझ र अत्याधुनिक रूपमा सुसज्जित वातावरणमा गरिन्छ र वास्तविक प्रक्रियामा5मिनेट लाग्छ तर तयारीले तपाईंको अस्पताल 2-3 घण्टासम्म बस्छ।
“मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया भनेको तपाईंको दृष्टि सुधार गर्नको लागि बादल भएको लेन्स हटाउने प्रक्रिया हो। यो एक सुरक्षित र नियमित प्रक्रिया हो। धेरै जसो अवस्थामा र राम्रो हातमा यो केहि मिनेट वा अधिकतम 20- 30-मिनेटमा समाप्त हुन सक्छ र विश्वभर 99% भन्दा बढी सफलता दर छ।
“मोतियाबिन्दुको शल्यक्रियामा तपाईको बादल भएको प्राकृतिक लेन्स हटाएर स्पष्ट कृत्रिम लेन्स लगाइन्छ। छोटो दुखाइरहित शल्यक्रिया भएकोले, रिकभरी पनि आश्चर्यजनक रूपमा छिटो हुन्छ। यद्यपि, यस अवधिमा तपाईंले ध्यानमा राख्नु पर्ने केही कुराहरू छन्।
1. नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा वर्णन गरिएको तालिका र विधि अनुसार आँखा ड्रपहरू लागू गर्नुहोस्। शल्यक्रिया गरिएको आँखालाई नछुनुहोस् वा रगड्नुहोस्।
2. तपाईंले केही दिन पछि वा तपाईंको डाक्टरको सल्लाह अनुसार टिभी हेर्ने, पढ्ने, लेख्ने र हिँड्ने हल्का व्यायाम जस्ता दैनिक क्रियाकलापहरू पुन: सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो शारीरिक गतिविधि सधैं हल्का राख्नुहोस्।
3. आफ्नो सुरक्षात्मक आँखा कभर लगाउनुहोस्, तपाईं सुत्दा धेरै सावधान रहनुहोस्। र सधैं शल्यक्रिया नगरिएको छेउमा सुत्नुहोस्।
4. नुहाउन वा नुहाउन सामान्यतया 5-7 दिन पछि वा तपाईंको डाक्टरको अनुमति अनुसार अनुमति दिइन्छ।
5. डाक्टरले तपाईंलाई सुरक्षात्मक ढाल वा सुरक्षात्मक चश्मा उपलब्ध गराउनेछ र तपाईंले यसलाई आफ्नो शल्यक्रिया गरिएको आँखामा सल्लाह दिइएको अवधिसम्म लगाउनु पर्छ।
1. कहिले पनि आफ्नो आँखा नमाल्नुहोस् वा तपाईंको आँखामा केहि पनि लगाउनुहोस्, पानी समेत। यसले संक्रमणको सम्भावना बढाउँछ।
2. शल्यक्रिया पछिको प्रारम्भिक अवधिमा शल्यक्रिया गरिएको आँखालाई छुन नदिनुहोस् साथै भारी तौल उठाउनबाट बच्नुहोस् किनकि यसले तपाईंको आँखामा अतिरिक्त दबाब दिनबाट रोक्छ।
3. शल्यक्रिया पछि कम्तिमा तीन हप्तासम्म पौडी खेल्ने वा टब बाथ प्रयोग नगर्नुहोस्।
4. शल्यक्रिया पछि केहि दिन सम्म राती ड्राइभ नगर्नुहोस् र शल्यक्रिया पछि कुनै पनि कडा शारीरिक गतिविधिमा संलग्न नगर्नुहोस्।
5. तपाईंको नेत्र रोग विशेषज्ञले तपाईंलाई अनुमति दिएसम्म आँखा मेकअप नगर्नुहोस्।
6. र कुनै पनि रातोपन, दुखाइ वा दृष्टि र पानी मा कुनै कमी को मामला मा। कृपया आफ्नो डाक्टरलाई तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस्।
मोतिबिन्दुको शल्यक्रिया पछि के गर्ने -
1. कुनै पनि आँखाको औषधि लगाउनु अघि साबुन र पानीले हात धुनुहोस् ।
2. दिनको समयमा निर्धारित सुरक्षा चश्मा र सुत्दा आँखा ढाल प्रयोग गर्नुहोस् ।
3. टाउको नुहाउनबाट बच्नुहोस्। यसको सट्टा, तपाईंले अर्को दिन आफ्नो घाँटी तल नुहाउन सक्नुहुन्छ ।
4. तेस्रो दिनमा, तपाईं टिभी वा मोबाइल हेर्न फेरि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ तर आफ्नो आँखा तनाव नगर्नुहोस् ।
5. यदि तपाइँ एक कार्यरत पेशेवर हुनुहुन्छ भने, तपाइँ डाक्टरको सहमति पछि आफ्नो कार्यालय कर्तव्यहरू पुन: सुरु गर्न सक्नुहुन्छ
6. यदि तपाईंलाई कुनै दुखाइ, रातोपन, डिस्चार्ज, कम दृष्टि, सूजन महसुस भएमा, कृपया आफ्नो आँखा चिकित्सकलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोस्।
मोतिबिन्दुको शल्यक्रिया पछि नगर्नुहोस् -
1. आफ्नो हातले आफ्नो आँखा नमिलाउनुहोस्। यसले शल्यक्रिया पछि निको पार्ने प्रक्रियालाई असर गर्न सक्छ। साथै, यसले आँखामा संक्रमण हुन सक्छ।
2. तपाईंको आँखालाई हानि पुऱ्याउन सक्ने गतिविधिहरूमा संलग्न नगर्नुहोस्। संक्रमण वा चोटपटक लाग्ने सम्भावनाबाट बच्न बच्चाहरूसँग खेल्ने, दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन चलाउने वा एक महिनासम्म पौडी खेल्ने जस्ता खेलकुद गतिविधिहरूमा संलग्न नगर्नुहोस्।
3. चिकित्सकले सुझाव नदिएसम्म शल्यक्रिया गरिएको छेउमा नसुत्नुहोस्।
४. भारी तौल नउठाउनुहोस्। यदि सम्भव छ भने, एक महिनाको लागि गहिरो र तनावपूर्ण खोकी, हाच्छिउँ र दिसाको लागि कडा तनावबाट बच्न। यी गतिविधिहरूले तपाईंको आँखामा दबाब बढाउन सक्छ।
PrevPreviousसहिदहरुले देखेको सपना अझै पुरा हुन सकेको छैन – अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल
Nextडा.बाबुराम भट्टराईद्वारा बृद्धभत्ता नलिने घोषणाNext